ISishingishane Esibulalayo iTropical sisabalalisa inhlekelele eMozambique, Malawi naseZimbabwe
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Ezintsha Zokuhamba » ISishingishane Esibulalayo iTropical sisabalalisa inhlekelele eMozambique, Malawi naseZimbabwe
Mashi 15, 2019
IMozambique neMalawi behlelwe yisiphepho i-Idai esishisayo sabulala abantu abangaphezu kwekhulu. Lesi siphepho siwele enkabeni yeMozambique ngoLwesine ebusuku.
Isiphepho iTropical Idai sigudluza isigidi esi-1.5 sinqamula iMozambique neMalawi, njengoba i-UN iqinisa impendulo.
Imvula enamandla nomoya ofinyelela cishe ku-200 km ngehora ufike eBeira, idolobha elikhulu elisogwini. IBeira, idolobha eliphakathi nechweba laseMozambique yinto ehlangabezana nomuntu othanda ukuhamba. Itholakala emlonyeni weRio Púnguè futhi ibilokhu iyindawo enhle kakhulu yokuhweba yamazwe angenawo umhlaba njengeBotswana neZimbabwe.
Okungenani izifundazwe ezine eZimbabwe kulindeleke ukuthi zithinteke kabi nge isiphepho esishisayo kulindeleke ukuthi kwenzeke ngempelasonto ngeSonto.
Ukuthengisa kokuqala kuqinisa ukuzibophezela kweGulfstream kokunye okusimeme kwe-jet fuel
Kungani ukubulawa kwabantu abaningi eNew Zealand kuyinkinga yobuphekula yase-United States?
I-Global Stainless Steel Welded Pipe Market Izokhula E...
I-Trend Entsha: Amakhowe Okwelapha Wezempilo Yokugaya
IPhilippines iyiNew Ultimate Medical Tourism...
I-Jamaica Incoma Isevisi Entsha Engapheli evela eMelika...
Ihhotela laseTampa Bay: Indawo Yokuhlala Yezinja Ephelele...
Ukuzethemba kwabahambi kuyakhula
I-iPhone entsha ishiya isivakashi saseMelika ePlaya del...
Isimo Sezimo Eziphuthumayo simenyezelwe e-Sri Lanka njenge-anti...
I-Biden Administration inxuse ukuthi ikhuphule izinga lama-visa e-H-2B ...
Imboni Yemakethe Yokuhlonza Isiguli I-Wristbands Market...
Jabulela Ihlobo Elingapheli eMalta
Imakethe ye-STD yomhlaba wonke izokhuphuka ifinyelele ku-USD 256 Bilion
Ucwaningo Olusha Lokuhlola Isifo I-Alzheimer's
I-Russia 'izogcina' izindiza eziqashiwe...
Ukwelashwa Okusha Komlomo Kugunyazwe Izilonda Ezisebenzayo...
I-US, Germany, Belize, Indonesia, Senegal isingatha okusha...